चितवन महोत्सवमा बोस्टनको ‘अफरै अफर’ ! जानुहोस स्टल नं. ३०४ र ३०५ – Saurahaonline.com
चितवन महोत्सवमा बोस्टनको ‘अफरै अफर’ ! जानुहोस स्टल नं. ३०४ र ३०५
शिव शर्मा चितवन पुस २६ । चितवनको गौरव चितवन महोत्सवमा विभिन्न स्टलले अवलोकनकर्तालाइ विभिन्न अवसर प्रदान गर्ने गरेका छन् । चितवनको प्रतिष्ठित कलेज बोस्टन इन्टरनेसनल कलेजले अवलोकनकर्ता र बिद्यार्थीलाइ विभिन्न अवसर प्रदान गरेको छ । कलेजको बारेमा जानकारी सम्बन्धित फर्म भरेपछि लक्की ड्र मार्फत बिजेता घोषित गरि आकर्षक दैनिक एवम बम्पर अवसरको व्यवस्था गरिएको छ । स्टल नं. ३०४ र ३०५ मा बोस्टनको गुणस्तरीय शिक्षा र ब्यबहारिक शिक्षण विधिका बारेमा जानकारीलिने बिद्यार्थी र अभिभावकको लाइन लाग्ने गर्दछ ।
दैनिक हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता संचालन गरि १० जना बिजेतालाइ हाम्रो स्टेसनरी र डेकरले आकर्षक पुरस्कार समेत दिने गरेको कलेजका एमबीए कार्यक्रमका बिद्यार्थी सुरज आचार्यले बताए । उनका अनुसार दैनिक उपहारमा आकर्षक साथै महोत्सवको आधिकारिक पत्रिका नया पत्रिकाको निशुल्क बार्षिक ग्राहक बन्ने अवसर प्रदान गर्ने छ । “अभिभावकलाई लक्षित गरि साझेदारीको आधारमा एक रात आवास कार्यक्रम संचालन गरेका छौ । लक्की ड्र बाट बिजेता हुनेले होटेलमा आवासको व्यवस्था मिलाइने छ ।” आचार्यले भने,“जंगल सफारी, सौराहा र चन्द्रागिरिको दुइ वटा टिकटको व्यवस्था दैनिक अवसरमा प्रदान गरिने छ ।”
कलेजले महोत्सवको अन्तिममा लक्की ड्र गरि बिजेता समेत बनाउने योजना लिएको छ । बिजेताले ‘आइ फाइभ’को आठौ जेनेरेसनको ल्यापटप, पूर्ण छात्रबृती, एमबीए तहको शैक्षिक कार्यक्रममा ५० हजार सम्म छुट प्राप्त गर्ने छन् । सो कार्यक्रम प्रत्येक ५÷५ जना विद्यार्थीले प्राप्त गर्नेछन । नगरकोटको होटेल कन्ट्री भिल्ला र पोखराको होटेल कुइन्स पार्कमा एक रात आवास कार्यक्रमको समेत व्यवस्था गरिएको हो ।
भरतपुर–९ हाकिम चोकमा रहेको बोस्टन इन्टरनेसनल कलेजले गुणस्तरीय एवं व्यसायिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । एमबीए, बिबिए, बिबिएबिआइ र बिसिआइएसको पढाइ हुने गर्दछ ।